Home	သတင်းများ	ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းများ	အယ်ဒီတာ့အာဘော်	တပ်မတော်သတင်း	ပြည်တွင်းသတင်းများ	နိုင်ငံတကာစစ်ရေးသတင်း	နိုင်ငံတကာသတင်းများ	မှုခင်းသတင်း	သတင်းသုံးသပ်ချက်	နိုင်ငံတကာသုံးသပ်ချက်	ပြည်တွင်းစစ်ရေးသတင်း	ကြားဖြတ်သတင်းများ	ပေးစာကဏ္ဍ	အမေးအဖြေကဏ္ဍ	အနုပညာ	စီးပွားရေး	အားကစား	နည်းပညာ	ကျန်းမာရေး	ဖျော်ဖြေရေး	စာအုပ်စင်	စာအုပ်စင်	ဗဟုသုတ	ကမ္ဘာ့ တစ်လွှားထူးထူးခြားခြား	အဖွဲ့ အစည်းများအကြောင်း	BreakingNews	အယ်ဒီတာ့အာဘော် ငွေနှင်းဆွတ်ထုံ တိမ်ဝတ် မှုန်ဝယ် တောင်ပံ ဖြန့်နေ တပ်မတော် (လေ) ……
Add new comment	Read 38 times	အဏ္ဏဝါပိုင်နက် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေ တပ်မတော်(ရေ)
Add new comment	Read 41 times	တစ်မျိုးသားလုံး လူညွန့်တုံးမည့် အန္တရာယ်မှ	ကာကွယ်ခဲ့သည်
Add new comment	Read 46 times	လုပ်သား အောင်လံ တလွင့်လွင့် ဘဝ အခြေမြင့် …
Add new comment	Read 29 times	အိမ်အိုဟောင်းရိ ချုံအတိနှင့် မီးရောင်မလင်း လမ်းမရှင်းလည်း ရင်တွင်းသစ္စာခိုင်မြဲပါသည်
Add new comment	Read 38 times	View all
Last Updated on Mar 25 2015	၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေး ကောက် ပွဲ ကို လွတ် လပ် ပြီး တ ရား မျှ တ သော ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ် ဖြစ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရေး များနှင့် စပ်လျဉ်း၍...
Last Updated on Mar 25 2015	နေပြည်တော်တိုင်းရှိ သောက် သုံး ရေ ရှား ပါး သည့် ဒေ သ များ သို့ တပ်မတော်သားများမှ သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်း...
Last Updated on Mar 25 2015	ကချင်ပြည်နယ်၊ မံစီမြို့နယ်အတွင်း တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ သစ်များ ခိုးထုတ်နေမှုကို တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရာမှ KIA (ကချင်) အဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲများ...
Last Updated on Mar 25 2015	Germanwings လေကြောင်း လိုင်း မှ ခ ရီး သည် တင် လေ ယာဉ် တစ် စင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ပျက်ကျ၊ ခရီးသည် အားလုံး သေဆုံးဟု ပြင်သစ် ထုတ်ပြန်...
Last Updated on Mar 25 2015	နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ် မ တော် နေ့ ကို ဂုဏ် ပြု ကြို ဆို သော အားဖြင့် ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်းနှင့် စုပေါင်း သွေးလှူ ဒါန်းပွဲ...
Last Updated on Mar 25 2015	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မည်...
Last Updated on Mar 25 2015	မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း မြဝတီ အသင်းကို အနိုင်ရ...
Last Updated on Mar 24 2015	နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော်နေ့အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဝါရင့်ဂန္ထဝင် ဂီတ အနုပညာရှင်ကြီးများ၏ ဒုတိယနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲ အခမ်းအနား...
Last Updated on Mar 24 2015	ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ များအား ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်...
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေး ကောက် ပွဲ ကို လွတ် လပ် ပြီး တ ရား မျှ တ သော ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ် ဖြစ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရေး များနှင့် စပ်လျဉ်း၍...
နေပြည်တော်တိုင်းရှိ သောက် သုံး ရေ ရှား ပါး သည့် ဒေ သ များ သို့ တပ်မတော်သားများမှ သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်း...
ကချင်ပြည်နယ်၊ မံစီမြို့နယ်အတွင်း တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ သစ်များ ခိုးထုတ်နေမှုကို တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးရာမှ KIA (ကချင်) အဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲများ...
Germanwings လေကြောင်း လိုင်း မှ ခ ရီး သည် တင် လေ ယာဉ် တစ် စင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ပျက်ကျ၊ ခရီးသည် အားလုံး သေဆုံးဟု ပြင်သစ် ထုတ်ပြန်...
နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ် မ တော် နေ့ ကို ဂုဏ် ပြု ကြို ဆို သော အားဖြင့် ဆေးရုံသုံး ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းခြင်းနှင့် စုပေါင်း သွေးလှူ ဒါန်းပွဲ...
၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မည်...
မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း မြဝတီ အသင်းကို အနိုင်ရ...
နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော်နေ့အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဝါရင့်ဂန္ထဝင် ဂီတ အနုပညာရှင်ကြီးများ၏ ဒုတိယနေ့ ဖျော်ဖြေပွဲ အခမ်းအနား...
ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူ များအား ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်...
သမိုင်း အဆက်ဆက် အစဉ်အလာ ကောင်းများနှင့် ပြည့်စုံနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေသော သမိုင်း အစဉ်အလာ ကောင်းသော တပ်မတော်	ကေသရာဇာ ပမာ စိတ်ထား ပြည်သူ့ နှလုံးသား	ရောင်နီဦး	စစ်ထွက်ယောက်ျား ဇာနည်ဖွား	သုံးကျိပ်ရဲဘော် ဦးဆောင်ဖော်သည့် ပြည်သူချစ်သော တပ်မတော်	အသည်း နှလုံးက ပါရှင်	သမိုင်း ခေတ်အဆက်ဆက် တပ်မတော်သည် ပြည်သူ့အတွက်	အကွက် ကျဲကျဲနှင့် လက်မည်းတွေ	လူသားအားလုံး တိုးတက်ဖို့ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ခံ သားကောင်များ	Facebook Share f
MWD Tech Facebook f
MWD Health Facebookf
Subscribe Rss r
လောက်ကိုင်ဒေသ တိုက်ပွဲများတွင် ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သော တပ်မတော်သား Read more
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Read more
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ Read more
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Read more
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗဟို
တပ်မတော် နယ်လှည့် အထူးကု ဆေးအဖွဲ့များ၏ ရွှေဘိုခရိုင် ၊ ကန့်ဘလူမြို့နယ်
မြ၀တီ - သတင်းလောက ရှေဆောင်မည် လူထုကြားက မြ၀တီ	Subscribe to this RSS feed
Wednesday, Mar 25 2015	ဒေသခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေး	Written by စကားဝါ
Published in	တပ်မတော်သတင်း
Read more...	Read 155 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နှစ်(၇ဝ) ပြည့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား အတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်	Written by စကားဝါ
Published in	ပြည်တွင်းသတင်း
Read more...	Read 80 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန်များကို သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ထမ်းရွက်နေသော တပ်မတော်သား များအတွက် အလှူငွေနှင့် ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများ ပေးအပ် လှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ	Written by စကားဝါ
Read more...	Read 126 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	ဆိုလာမီးအိမ်များ ပေးအပ်လှူဒါန်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေး	Written by စကားဝါ
Read more...	Read 125 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	နေပြည်တော်တိုင်းရှိ သောက် သုံး ရေ ရှား ပါး သည့် ဒေ သ များ သို့ တပ်မတော်သားများမှ သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်း …	Written by စကားဝါ
Published in	ခေါင်းကြီးပိုင်းသတင်းများ
Read more...	Read 137 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	ကနေဒါက IS တို့အပေါ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု တိုးမြှင့်မည် ….	Written by စကားဝါ
Published in	နိုင်ငံတကာစစ်ရေးသတင်း
Read more...	Read 158 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	သြစတြေးလျ နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဥက္ကာခဲ ကျရောက်ခဲ့သည့် ချိုင့်ဝှမ်းကို တွေ့ ရှိ ….	Written by စကားဝါ
Published in	နိုင်ငံတကာသတင်း
Read more...	Read 160 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	ဟစ်တလာ ရေးဆွဲ ထားသော ရေဆေး ပန်းချီကားကို အမေရိကန်တွင် လေလံတင် ရောင်းချမည်	Written by စကားဝါ
Read more...	Read 132 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ ပညာသင် နှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများ၏ ကျောင်းဆရာ မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားသူ များပြား	Written by စကားဝါ
Read more...	Read 128 times	Tagged under:
Wednesday, Mar 25 2015	နွေရာသီ ကာလ ရန်ကုန်မြို့ရေပေးဝေရေး အတွက် ရေပေးဝေရေး စခန်းရှစ်ခု၌ ရေအလုံ အလောက်ရှိနေ	Written by စကားဝါ
Read more...	Read 115 times	Tagged under:
လူသားများ၏ အခွင့် အရေး ဖြစ်သော ဥပဒေတွင် ခုခံ ချေပခွင့် ကြားနာခွင့် တို့သည် အရေးကြီး ….	မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း မြဝတီ အသင်းကို အနိုင်ရ	မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း ကွင်းလယ် ကစားသမား သန်းသန်းထွေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း	အမေရိကန် လေတပ် အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်ရန် အိုကီနာဝါ စီရင်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမိန့်ထုတ်ပြန်	Start Prev 1234567 8910 Next End Page 1 of 3036
ပြည်တွင်းသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နှစ်(၇ဝ) ပြည့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား အတွက် အလှူငွေများ ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၁၆ ပညာသင် နှစ်တွင် ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းများ၏ ကျောင်းဆရာ မှတ်ပုံတင် နွေရာသီ ကာလ ရန်ကုန်မြို့ရေပေးဝေရေး အတွက် ရေပေးဝေရေး စခန်းရှစ်ခု၌ ရေအလုံ လူသားများ၏ အခွင့် အရေး ဖြစ်သော ဥပဒေတွင် ခုခံ ချေပခွင့် ကြားနာခွင့် တို့သည် မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း မြဝတီ အသင်းကို အနိုင်ရ	မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်း ကွင်းလယ် ကစားသမား သန်းသန်းထွေးနှင့် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နံပါတ်တစ် တက္ကသိုလ် နေရာ၌ ရပ်တည်နေ	လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းဖြစ် ဆက်လက် အကောင်အထည်	နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဆု စိစစ် ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ တတိယ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် ကျောင်းသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ယနေ့ စတင် ကစားမည်	အရှေ့တောင် အာရှ တိုက်ကွမ်ဒို ဖိတ်ခေါ် ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာရွှေတံဆိပ် တစ်ခု More News...	တပ်မတော်သတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	ဒေသခံ ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန်များကို သက်စွန့်ကြိုးပမ်း ထမ်းရွက်နေသော တပ်မတော်သား ဆိုလာမီးအိမ်များ ပေးအပ်လှူဒါန်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ရဲမေ စွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲနှင့် ကျပန်း စကားပြော ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ	အိန္ဒိယ ရေတပ်မှ တိုင်းတာရေး ရေယာဉ် ပြန်လည် ထွက်ခွာ	စစ်မှုထမ်းဟောင်း မိသားစု များအား စားသောက် ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်၊ သောက်သုံး ရေကန် နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော် နေ့ကို ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုသော အားဖြင့် စုပေါင်း သွေး လှူဒါန်း	ကျပန်း စကားပြော ပြိုင်ပွဲနှင့် စကားရည်လု ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပ	ပင်လယ်ပြင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ခန်း (Combined Fleet Exercise) ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်း	တပ်မတော် ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၆) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြု More News...	ပြည်တွင်းစစ်ရေးသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	တပ်မတော်မှ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်စဉ် ကချင်ပြည်နယ်၊ မံစီမြို့နယ်အတွင်း တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ သစ်များ ကေအိုင်အေ (ကချင်) အဖွဲ့မှ တပ်သား အဆင့်ရှိသူ ၁ ဦး အလင်း တရားမ၀င် ပိုင်ရှင်မဲ့ကျွန်းသစ်များ ဖမ်းဆီးရမိ	တပ်မတော်စစ်ကြောင်း အခြေပြုစခန်းသို့ ကေအိုင်အေ(ကချင်) ကေအင်န်ယူ တပ်မဟာ (၃)မှ ထင်းခုတ်နေသော ရွာသားများအား ဖမ်းဆီး	ကေအိုင်အေ(ကချင်)အဖွဲ့မှ ထောင်ထားသည့်မိုင်း နင်းမိပေါက်ကွဲ	နောင်တရားမြို့နယ် အတွင်း စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြားများ တပ်မတော် နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေး စစ်ကြောင်းနှင့် ကေအိုင်အေ လောက်ကိုင် ဒေသအတွင်း တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများက နယ်မြေ More News...	မိုးလေ၀သသတင်း	Tuesday, Mar 24 2015	0 comment	မိုးလေဝသ အခြေအနေ တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ထူးခြားသည့် နေ့အပူချိန်များ	နေ့စဉ် မိုးလေ၀သ သတင်း (၃-၃-၂၀၁၅)	မိုးလေဝသ အခြေအနေ	၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ	မိုးလေ၀သသတင်း	၂ဝ၁၄ နှင့် ၂ဝ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်မှ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် အတွင်း အင်အားအသင့်အတင့်ရှိ မြေငလျင် လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပွား	More News...	နိုင်ငံတကာသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	သြစတြေးလျ နိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ဥက္ကာခဲ ကျရောက်ခဲ့သည့် ချိုင့်ဝှမ်းကို ဟစ်တလာ ရေးဆွဲ ထားသော ရေဆေး ပန်းချီကားကို အမေရိကန်တွင် လေလံတင် ရောင်းချမည်	အမေရိကန် လေတပ် အခြေစိုက်စခန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကို ရပ်တန့်ရန် အိုကီနာဝါ NATO အဖွဲ့တွင် ဒုတိယမြောက် စစ်အသုံးစရိတ် အများဆုံး သုံးစွဲသည့် နိုင်ငံအဖြစ် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ အရေးပါဆုံး ဂေဟစနစ်ကို ပျက်စီးနိုင်ကြောင်း ဆိုမာလီ ပင်လယ် ဓားပြ များသည် အိန္ဒိယ နိုင်ငံနှင့် ပိုမို နီးကပ်စွာ ပြောင်းရွှေ့ More News...	နိုင်ငံတကာစစ်ရေးသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	ကနေဒါက IS တို့အပေါ် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှု တိုးမြှင့်မည် …. အစ္စရေး စစ်ဘက်က ဂါဇာ နယ်စပ် အနီး ရုတ်ခြည်း စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု တစ်ရပ် ပြုလုပ်	ရုရှားနှင့် အရေး တင်းမာ နေစဉ် အမေရိကန်က အရှေ့ ဥရောပ ခြောက်နိုင်ငံ ဖြတ်ကျော်ကာ ရုရှား နိုင်ငံ၏ ရုတ်ခြည်း စစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု များသည် မည်သည့် နိုင်ငံကိုမျှ IS ချေမှုန်းရေး အတွက် အမေရိကန် အစိုးရက ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ သုံးစွဲ …	အိန္ဒိယကထိန်းချုပ်ထားသော ကတ်ရ်ှမီးယားဒေသရှိ စစ်စခန်းတစ်ခုအား စစ်သွေး More News...	စစ်ဘက်နည်းပညာ	Saturday, Mar 21 2015	0 comment	မြောက်ကိုရီးယား၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် အမေရိကန်က ရေဒါသစ် တရုတ် တပ်မတော်က Type 093 အတန်း အစား အသေးစား ရေငုပ် သင်္ဘော ထုတ်ဖော် ပြသ	အီရန်က တာဝေးပစ် ခရုစ် ဒုံးကျည် အများ အပြား ထုတ်လုပ် လျက်ရှိ	အီရန်နိုင်ငံမှ Falaq-1 နှင့် Falaq-2 ဒုံး အမျိုးအစားသစ်တို့အား ထုတ်ဖော် Denel Dynamics ကုမ္ပဏီမှ ပိုမိုတိကျစွာ ပစ်ခတ်နိုင်မည့် အမြောက် ခဲယမ်းသုံး UAE တပ်မတော်သို့ Agrab Mk2လှုပ်ရှား စိန်ပြောင်းလက်နက် စနစ်များ ပေးပို့ More News...	နည်းပညာသတင်း	Tuesday, Mar 24 2015	0 comment	Windows 10 တွင် rtana Cortana နှင့် X box App များပါဝင်မည် Samsung ကုမ္ပဏီမှ OLED မျက်နှာပြင်နည်းပညာအတွက် ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံမြှုပ်နှံရန်စီစဉ် Facebook က ကျန်းမာရေးအထောက် အကူပြု က ကျန်းမာရေး အထောက် အကူပြု Move App ကို ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ စတင်ဖြန့်ချိလာတဲ့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာ စတင်ဖြန့်ချိလာတဲ့ LG 14"Ultra PC & All in one PC	နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး လေယာဉ် Solar Impulse 2	More News...	အားကစားသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	ရွန်းနီ၏ တစ်ပတ်လစာကို တော်ကွေးကစားသမားများ ၁၆ နှစ်ကြာမှရနိုင် ဒီဂီယာကို တက်နင်းခဲ့သည့် စကာတယ် သုံးပွဲ အပယ်ခံရ	Girls' Generation အဖွဲ့၏ ငါးခုမြောက် တေးအယ်လ်ဘမ် မေလအတွင်း ဖြန့်ချိမည်	အားကစားသတင်းတို	BNP paribas တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ၈ျိုကိုဗစ် ချန်ပီယံ ဖလားဆွတ်ခူး	World Grand Prix ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ထရမ့်ပ်ကအိုဆူလီဗန်အား အနိုင်ရရှိ	More News...	ကျန်းမာရေးသတင်း	Tuesday, Mar 24 2015	0 comment	ရာသီဥတုနှင့် အစား အသောက် များကြောင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ဖြစ်ပွား မှုကို ဆင်ခြင်ပါ ပြည်တွင်းမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်များနှင့် ကလေးသူငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေး အတွက် ကင်ဆာရောဂါကု ဆေးရုံသစ် တည်ထောင်ရန် တိုင်ဝမ်နှင့် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိ	မျက်စိ ဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့ စမ်းသပ် ခွဲစိတ် ကုသပေး	အရန် သားဖွားဆရာမ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပ	မျက်စိ ဝေဒနာရှင်များအား အခမဲ့ ကုသ ပေးလျက်ရှိ	More News...	အနုပညာသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	သင်္ကြန် ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ပရိသတ် လက်သင့်ခံနိုင်သည့် အဝတ်အစားမျိုးကိုသာ သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေ ပွဲများတွင် ပရိသတ် လက်သင့် ခံနိုင်သည့် အဝတ်အစား မျိုးကိုသာ ရေကူးဝတ်စုံနှင့် ဓာတ်ပုံကို Instagram တွင် ဆလီနာဂိုမက်ဇ် ဖော်ပြ	The Ark ဟစ်ဟော့ပ်အဆို အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင် သစ်များကို ထုတ်ဖော်မိတ်ဆက်	အနုပညာ သမားဆိုတာ အနုပညာလောဘ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြင့်ခိုင်	ရီဟန်းနား၏ ဇာတ်ဝင်တေး သီချင်းနှစ်ပုဒ် အွန်လိုင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိ	ဇာတ်လမ်း ရွေးချယ်မှု များကြောင့် ယခင်ကထက် ဇာတ်ကား ထွက်ရှိမှု နည်းသွား မည်ဟု ဇာတ်ကားတိုင်းကို သဘာဝကျအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး သရုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ပက်ထရစ် ရှာပြော	More News...	သိမှတ်ဖွယ်ရာ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ	Friday, Mar 06 2015	0 comment	ရေအောက် ဂြိုဟ်သားဟုပင် ခေါ်ရသည့် ရှားပါး ငါးမန်းတစ်ကောင် သြစတြေးလျ ကမ်းလွန်တွင် သြစတြေးလျတွင် ပါးစပ် နှစ်ပေါက်ပါ ရှိသည့် ရှားပါး ငါးတစ်ကောင်ကို ဖမ်းဆီးရမိ	ဟောင်ကောင်တွင် အမြွှာသန္ဓေသားကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားသည့် မိန်းကလေးငယ် မွေးဖွား	ပြည်တွင်း မျိုးစိတ် အလှ နွားပုလေးများ ရှားပါးလျက်ရှိ	အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အသက် ၇ဝ နှစ်အရွယ် အမျိုး သမီးကြီး တစ်ဦး ကမ္ဘာ့ အသက် အကြီးဆုံး မင်းဘူးခရိုင်တွင် မိန်းကလေး လေးမြွှာပူး မွေးဖွား	ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ် မှတ်တမ်း နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားတွင် ကမ္ဘာ့အရပ် အရှည်ဆုံး ထွန်စက်ဖြင့် ကမ္ဘာလှည့်သူ မိန်းကလေး တောင်ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသသို့ သွားရောက်မည် …	More News...	မှုခင်းသတင်း	Wednesday, Mar 25 2015	0 comment	နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် အတာသင်္ကြန် ကာလအတွင်း ရာဂစိတ်ကို နိုးကြွစေသော ဆေးဝါးများ မိုင်းယောင်းမြို့၌ လူနေအိမ် လေးလုံး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား	တမလန်း ဓားရွေတုံးများ ဖမ်းဆီးရမိ	ကျောက်တူးနေစဉ် ကျောက်တုံး ပြုတ်ကျ၍ တစ်ဦး သေဆုံး	လက်နက် ခဲယမ်းများ၊ ကျောက်စိမ်းတုံး များနှင့် မူးယစ် ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီး ရမိ	လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ ကျောက်စိမ်းတုံးများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီးရမိ	ဖုန်းအားသွင်းရာမှ အပူရှိန် လွန်ကဲပြီး မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား	အမျိုးသား တစ်ဦး မြေကျင်းအတွင်း မြေကြီးတုံးပိ သေဆုံး	More News...	စီးပွားရေးသတင်း	Monday, Mar 23 2015	0 comment	ငါးခြောက် ဒိုင်များ၌ ကုန် ပြတ်လပ်သည် အထိ ဝယ်ယူမှု မြင့်တက်လာ အမျိုးသား ပို့ကုန် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကို မကြာမီ ထုတ်ပြန် ကြေညာမည်	ဆီးသီးဆန် ဈေးကျဆင်းမှုကြောင့် ဆီးသီး တစ်တင်းလျှင် ငွေကျပ် ၁၅ဝဝ ခန့်သာ ရရှိ	ဘဲသား စားသုံးသူ များပြားလာ၍ ဝယ်လိုအား မြင့်တက် လာသော်လည်း ဈေးကွက် အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သော ငါးကျပ်တင်ခြောက်များ တင်ပို့မှု လျော့နည်းနိုင်	ရွှေဈေးနှုန်းနှင့် နိုင်ငံခြား ငွေကြေး	ဆိတ် သိုးမွေးမြူရေး တောင်သူများ အသားဈေး ပိုမို ရရှိသဖြင့် အဆင်ပြေလျက်ရှိ	ယခုနှစ်တွင် ရာသီဥတု ပူပြင်းမှုကြောင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ သရက်သီး More News...	Stay Connected with us Facebook Rss Twitter Mobile Newsletter Tivi ၂၄-၃-၂၀၁၅ မြ၀တီသတင်း Views : 91 Popular
နေပြည်တော်တိုင်းရှိ သောက် သုံး ရေ ရှား ပါး သည့် ဒေ သ များ သို့ တပ်မတော်သားများမှ သောက်သုံးရေများ ဖြန့်ဝေ လှူဒါန်း …
Add new comment	Read 137 times	Germanwings လေကြောင်း လိုင်း မှ ခ ရီး သည် တင် လေ ယာဉ် တစ် စင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ပျက်ကျ၊ ခရီးသည် အားလုံး သေဆုံးဟု ပြင်သစ် ထုတ်ပြန် ….
Add new comment	Read 52 times	၂ဝ၁၅ ခုနှစ်၊ နှစ်(၇ဝ)ပြည့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်မည် …..
Add new comment	Read 71 times	မြန်မာ့ လက်ရွေးစင် အသင်း မြဝတီ အသင်းကို အနိုင်ရ ….
Add new comment	Read 54 times	၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ရွေး ကောက် ပွဲ ကို လွတ် လပ် ပြီး တ ရား မျှ တ သော ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ရပ် ဖြစ်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ စနစ် ရှင်သန် ဖွံ့ဖြိုးရေး များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး
Add new comment	Read 61 times	ကမ္ဘာ့အားကစားသတင်း1134
ခြေရာမဲ့လှိုင်း အပိုင်း(၄) (1)
ထူဆန်းထွေလာ မျက်လှည့်ပညာ (အပိုင်း-၁၆၇) (1)
ရယ်စရာ မောစရာ ဟာသကမ္ဘာ (အိပ်မက် ဂိတ်ဆုံး) (5)
မြန်မာ့တပ်မတော် မှ Free Fall ဆင်းခြင်း မြင်ကွင်းတခု (1)
တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးအတွက် တပ်မတော် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့များမှ ဆေးကုသမှု မှတ်တမ်း ဗီဒီယို (2)
အမှတ်(၃) တက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးတပ် (မော်လမြိုင်)၏ တပ်ရင်းတိုက်ပွဲဝင် မွမ်းမံသင်တန်း လေ့ကျင့်နေမှုများ (1)
တုနှိုင်းမဲ့ သစ္စာ အပိုင်း(၃) (1)
ဆွဲအားပြင်းတဲ့ ချစ်ခြင်း (အပိုင်း-၁) (3)
သံစဉ်များနဲ့ကမ္ဘာ (၂၀၁၃)၊ Level(2) ပွဲစဉ်(၃၁) (1)
ရဲရင့်သူတို့ အောင်ပွဲ အပိုင်း(၁) (7)
Download Newspapers Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေး ကျောက်တံခါး အောက်တိုဘာ ၁၉
ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး အပြည့်အစုံသို့ ...	ငယ်စဉ်က လီယိုနာဒိုအား ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြောင်း အမန်ဒါ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ဇန်နဝါရီ ၆
ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် လောကတွင် အပြည့်အစုံသို့ ...	ပတ္တယား အိုးပင်း တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဒုတိယ ဗန်ကောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂
ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တယားမြို့၌ အပြည့်အစုံသို့ ...	ဂျက်စတင်ဘီဘာအား နိုင်ငံအတွင်းမှ နှင်ထုတ်ရန် လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ဇန်နဝါရီ ၂၆
ကနေဒါပေါ့ပ်ငွေကြယ်ပွင့် အပြည့်အစုံသို့ ...	ကမ္ဘာ့စွမ်းအား အမြင့်ဆုံး ထိပ်တန်း ကွန်ပျူတာ ပေကျင်း နိုဝင်ဘာ ၂၁
တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်တုံး ပြည်နယ် အပြည့်အစုံသို့ ...	ကာတာ အိုးပင်း တင်းနစ် ပြိုင်ပွဲ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဒိုဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇
ရိုမေးနီးယားတင်းနစ်မယ် ဆီမွန်နာဟာ အပြည့်အစုံသို့ ...	ရထား တွဲချော်မှု ဖြစ်ပွား နေပြည်တော် မေ ၃ဝ
မြစ်ကြီးနားမှ မန္တလေးသို့ ထွက်ခွာ လာသော အပြည့်အစုံသို့ ...	ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုဖလားကို ချယ်လ်ဆီးအသင်း လန်ဒန် နိုဝင်ဘာ ၂၁
ချယ်လ်ဆီး အသင်းသည် ယခုနှစ် အပြည့်အစုံသို့ ...	တရားမဝင် သစ်ခွဲသားများ ဖမ်းဆီးရမိ မြင်းမူ ဇူလိုင် ၁
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး အပြည့်အစုံသို့ ...	BAFTA ရုပ်ရှင် ထူးချွန် ဆုပေးပွဲတွင် ဘရက်ပစ် လန်ဒန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈
လန်ဒန်မြို့Royal Opera House တွင် အပြည့်အစုံသို့ ...	MNL အမှတ်ပေး ပြိုင်ပွဲ စတင်ကျင်းပ ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၁ဝ
၂ဝ၁၅ ရာသီ MNL အမှတ်ပေး အပြည့်အစုံသို့ ...	မမြင်နိုင်သော စပီကာ ထုတ်လုပ် ရောင်းချတော့မည် တီထွင်အောင်မြင်တာ အရင်နှစ်ကတည်းက ပါ။ ယခုတော့ ဈေးကွက်ကို အပြည့်အစုံသို့ ...	ဗန်ပါစီသည် မန်ယူကို ပြီးပြည့်စုံစေ သူဟု ဖာဂူဆန် ရော်ဘင် ဗန်ပါစီသည် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြည့်စုံ အပြည့်အစုံသို့ ...	WBO အမျိုးသမီး ဖလိုင်းဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ ဆန်ဒီယေဂို နိုဝင်ဘာ ၂၅
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အပြည့်အစုံသို့ ...	တစ်ကျော့ပြန် နည်းပြ စကိုလာရီနဲ့ အတူ ဥရောပ ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ ခေတ္တရပ်နားထားချိန်မှာ အပြည့်အစုံသို့ ...	ပထမဆုံး အကြိမ် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Harry Potter စာအုပ် လန်ဒန် မေ ၂၂
ဂျေကေရိုးလင်း ရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၉၇ ခုနှစ်က အပြည့်အစုံသို့ ...	ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မျက်မမြင်များ အတွက် စက်ရုပ် အင်္ဂါတု ခိုင်
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် သုတေသီ များက ကာလရှည်ကြာ စမ်းသပ် အပြည့်အစုံသို့ ...	ရက်အလိုက် သတင်းများ ကြည့်ရှုရန် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် Channel News Asia (CNA) သတင်းဌာနတို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု Views : 725 <!-Foreign Exchange Rates widget - HTML code - fx-rate.net -->
ငွေလဲနှုန်း <!-end of code--> ThaZin FM Online Radio Get the Flash Player to see this player.
ThaZin FM Online Radio